Indlela Yokuthuthukisa Izithombe Zama-Injini Yokusesha Ngokufanele? - Phendula ngo-Semalt
UJason Adler, i-8 (Semalt iMenenja yeNtuthuko yeMakhasimende, uthi ukuthuthukiswa komfanekiso kungenye yezinyathelo ezinkulu zomkhankaso we-SEO. Izinjini zokusesha zihlakaniphe futhi zihlakaniphe kunanini ngaphambili, futhi inqubo yokuthola simo esihle sokusesha inzima kakhulu. Okuqukethwe kwekhwalithi akwanele njengoba kufanele uqaphele nokwenza ngcono isithombe.
Umbhalo we-Alt namathegi encazelo:
I-alt umbhalo kanye namathegi echazwayo asemthethweni kusuka endaweni yokubuka ye-SEO. Uma isithombe sakho singabonisi kahle, kufanele ususe isithombe esinesixazululo esingcono futhi ungakhohlwa ukufaka umbhalo we-alt kanye namathegi encazelo kuwo. Umbhalo we-alt usebenza njengombhalo we-anchor wokuxhumana okuqondile. I-Google ayincoma ukuthi isebenzise izixhumanisi eziningi ngaphakathi kwekhasi, kodwa kuyisenzo esihle se-SEO. Ngokuqondene namathegi wokuchaza, ungase ungeze noma ungabangezi.
Uma kuziwa ekulondolozeni izithombe kuPaint noma ku-Photoshop, kufanele ulondoloze ifayela ngendlela efanele. I-JPEG iyifomethi engcono kakhulu futhi edume kakhulu yesithombe enika inani lokubukeka jikelele kwendawo yakho. I-PNG, ngakolunye uhlangothi, kuhle kumahluzo afana nezithombe ezincane zehluzo zewebhu kanye nama-logos. Ama-GIF ayasiza uma ufuna ukwengeza izithombe ezithile ezihlokweni zakho.
Sebenzisa izithombe ezihlobene nokuqukethwe kwakho. Qinisekisa ukuthi ukhetha izithombe eziphezulu, futhi isinqumo sabo nesayizi zikhulu ngokwanele ukuze zibonakale kuwo wonke amadivayisi. Enye into ebalulekile okumele uyiqaphele ukuthi kufanele usebenzise izithombe zesitoko kuphela. Qaphela ngenkathi ukhetha isithombe bese uqinisekisa ukuthi ayikho i-copyright. Uma ufuna ukuthola izithombe ezinjalo, ungabhalisela i-Getty Images, Shutterstock noma ezinye izinsizakalo ezifanayo. Ungase ufune ukushintsha izithombe zakho, futhi kukhona amathuluzi amaningi nezinhlelo zokwenza kwenzeke. Amafayili amafayela amakhulu azodonsela isikhathi sokulayisha sesayithi lakho phansi futhi angathinta isayithi lakho lokusesha, ngakho kufanele uhlaziye njalo izithombe ngaphambi kokuzilayisha. Uma usu-Mac, ungashintsha isilinganisela ngokukhethwa kukho kobukhulu. Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa i-Photoshop, i-Picresize, noma amanye amathuluzi afanayo ukuze wenze umsebenzi wakho ufezeke ngokuphelele.
Ngokuvamile, abantu bayakhohlwa ukuqamba kabusha amafayela wabo wesithombe. Ngaphambi kokuba ulayishe isithombe kuwebhusayithi yakho, kufanele unikeze igama elifanele. Ku-iPhone, amagama wefayela abizwa njenge-IMG_6053. Kubalulekile ukuyiqamba kabusha ngaphambi kokuba usebenzise isithombe kuwebhusayithi yakho ngoba lokhu kuyimfuneko ukuthi u-SEO usebenzise.
Umbhalo we-Alt uchaza isithombe sakho futhi i-Google isebenzisa lolu lwazi ukwazi okuningi mayelana nokuqukethwe kwakho. Qinisekisa ukuthi umbhalo wakho we-alt uchaza, ucacise, ucacile futhi ufundisa. Ngaphezu kwalokho, akufanele ukwenze okuningi kwamagama angukhiye. Eqinisweni, umthetho omkhulu ukubhala i-altare ngamagama ambalwa, uchaza ukuthi okuqukethwe kwakho kuyini.
Incazelo kanye negama:
Uma unewebhusayithi ye-WordPress, kufanele ungeze amazwibela kanye nencazelo. Incazelo isetshenziselwa ukwengeza imininingwane eminingi, njengomthombo wesithombe sakho futhi uthathe nini. I-caption, ngakolunye uhlangothi, ibonisa phansi kwesithombe kokuthunyelwe okushicilelwe. Kuyasiza ukuchaza uhlobo lwesithombe sakho kodwa akuyona into ebalulekile ye-SEO Source .